नेपाली मौलिक ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ अब पुष १५ मा : सम्भव छैन र ? – Nirantarkhabar
संस्कृतिविद डाक्टर जगमान गुरुङको भनाई लाई आधार मान्ने हो भने पुष १५ गते मगरहरुको ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ हो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा नयाँ पिढीका भाइबहीनीलाई ‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे’ भन्दै सम्बोधन टुंग्याए । संयोगले १४ फेब्रअरीकै दिन परेको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ को शुभकामना समेत नछुट्नुले प्रधानमन्त्रीले युवा पुस्तालाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । सँगसँगै देशका कार्यकारी प्रमुखले पश्चिमा संस्कृतिमा आधारित ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ को शुभकामना आफ्नो विशेष सम्बोधनका क्रममा नछुटाउनुले ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ को प्रभाव नेपालमा शसक्त रुपमा रहेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्छ ।
१४ फेबु्रअरीमा पर्ने ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ को दिनमा मात्रै हैन त्यो भन्दा अगाडीदेखि नै ‘भ्यालेन्टाइन्स विक’ अन्तर्गत भन्दै रोज डे,प्रपोज डे,हग डे लगायतका नाममा ति दिनहरुलाई विशेष बनाउने प्रयास समेत भैरहेको हामीले देख्दै आएका छौं । भ्यालेन्टाइन डे मनाउन सुरु गरिनुको अन्तरकथा इतिहाँसप्रति सम्मान नै छ । ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ वा ‘भ्यालेन्टाइन्स विक’को विषयमा गहिराईमा जाने र चर्चा गर्ने अभिप्राय नभएकाले यीनीहरुको चर्चा यति नै । तर, ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ र ‘भ्यालेन्टाइन्स विक’ भन्दै यस्ता दिनहरुलाई अवसर मानेर वा वहाना गरेर नेपालमा गरिने गतिविधि,शैली र विकसित हुँदै गएको मानसिकताको भने चर्चा अवस्य गरिन्छ ।
‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ को बाढीमा युवा पुस्तामात्रै छैनन्
प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधनका क्रममा युवा पिढीलाई भनेर शुभकामना दिए । विशेषगरी यसको सान्दर्भिकता पनि युवा पुस्तासँग नै जोडिन्छ । तर,यो सोच कतिपयलाई संकुचित पनि लाग्न सक्छ । हिजोआज सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त युवा पुस्ताको त कुरै नगरौं, उमेर ढल्किएका र गाला चाउरिँदै गएकाहरु समेतले ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ भन्दै यसप्रति देखाउने चासो र रतिन खोज्ने शैली विचित्र छ र भद्दा लाग्छ । सामाजिक सञ्जालमा मेहनत गरी–गरीकन लेखिएका भ्यालेन्टाइन स्पेशल स्टाटस,पोस्ट गज्जव लाग्छन् । ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ को दिनमा हाँकाहाँकी होस वा ढाँट–छल गरेर जोडी खोज्दै हिँड्नुपर्ने भार बोकेको महसुस गरीरहेका नेपालीहरुको दयनिय अवस्थाले आधुनिकताको संकेत गर्छ ? दिनरात विना अर्थको मेहनत गरेर वा प्रलोभनमा पारेर मिलाइएको कथित जोडी लिएर पर्यटकिय स्थलहरुमा भिड बढाउनेहरुले र सुरक्षित लाग्ने होटलका क्याविन खोज्दै टेबलमा वाइन र वियर पिएर रित्तिएका बोतलको लाइन लाउनेले आफ्नो बैध जोडी(श्रीमान् वा श्रीमती)लाई कतिको न्याय गरिरहेका छन् ?
फोहोर मलाई भनेर लेखिएको डस्टविनमा फोहोर फाल्नुपर्छ अन्य ठाउँमा फोहोर फाल्नुहुँदैन भन्ने कुरा अरुबाट कहिल्यै नसिक्नेले भ्यालेन्टाइन डे मा केटा वा केटी लिएर डुल्नैपर्छ भन्ने कुरा चुम्बकले फलाम ताने जसरी ग्रहण गरीरहँदा हाम्रो हैसियत कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरा पनि एक पटक ठन्डा दिमागले सोच्दा राम्रो होला । आयातित संस्कृतिप्रति हामी राम्रो सोच विचार नै नगरी आसक्ति देखाइरहेका त छैनौं ? आफ्नो त्याग्ने अर्काको अँगाल्ने शैली हुँर्कदै जाँदा यसको चपेटामा हाम्रा मौलिकताहरु पिल्सिँदै गएका छन् भन्दा वास्तविकता भन्दा टाढा गएको महसुस हुँदैन होला ।
‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ लाई कथित प्रेम दिवस मानेर भोलीका दिनमा सँगै जिवन विताउने हो भनेर योजनामा रहेका र वर्तमानमै जिवनसाथी रहेका जोडीमाथी ठुलो आपत्ती नरहला । तर, त्यस्ता जोडीले पनि अव आयातित संस्कृतिमा आधारित ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ हैन् हाम्रो मौलिकतालाई समेट्ने पर्व,सन्दर्भ,विशेष दिनहरुलाई अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने विशेष आग्रह चै अवस्य रहने छ ।
नेपाली मौलिकता सहितको ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ पुष १५ हुन सक्छ
सुचना र सञ्चार प्रविधिको तिव्र विकास भएको अहिलेको अवस्थामा विश्वमा भैरहेका हरेक कुराको जानकारी राख्नु, आफूलाई अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य नै छ । विश्वव्यापीकरण नकार्न सक्ने अवस्था छैन् । विश्वमा भएका धेरै विषय सजिलै विश्वभर अनुकरण गर्न,सिक्न र विस्तार गर्न निकै सहज अवस्था छ । तर,माग्न सजिलो छ भन्दैमा आफुसँगै पर्याप्त भएको वस्तु अरुसँग माग्नु उपयुक्त हुँदैन्, आफ्नै बासस्थान सुरक्षित हुँदाहुँदै अर्काकोमा शरण पर्न जानु पनि शोभनिय हुँदैन ।
संस्कृतिकै कुरा गर्नुपर्दा हामी नेपालीले अरुबाट अनुकरण गर्नैपर्ने गरी हामीमा अभाव छैन् । छँदैछैन् । प्रेम प्रणयको सन्दर्भ जोडिएका संस्कृति हुन वा अन्य कुनै विषयसँग सम्बन्धित हामीले अरुबाट कुनै दिवस वा पर्व सापट लिनुपर्ने, निहुरेर तिम्रो पर्वमा हामी पनि सामेल हुन्छौं भन्दै जानुपर्ने अवस्था पटक्कै छैन् । हाम्रो देशमा १ सय २५ भन्दा धेरै जाति छन् । अधिकांस जस्तो जातिका आफ्ना मौलिक अर्थ र सांस्कृतिक महत्व बोक्ने सन्दर्भ एवम् पर्वहरु छन् । मौलिक रुपमा मानिआएका प्रचलन ,मान्यताहरु छन् ।
‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ को जस्तै मर्म र सन्देश बोक्ने हाम्रा मौलिक अवसर नभएका हैनन् । संस्कृतिविद डाक्टर जगमान गुरुङको भनाई लाई आधार मान्ने हो भने पुष १५ गते मगरहरुको ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ जस्तै हो । मगर युवा युवतीले त्यस दिन आफ्नो जिवन साथी रोज्ने दिनको रुपमा लिइने गुरुङ बताउनुहुन्छ । जोडी खोजेर ग्रार्हस्थ जिवनको सूरुवात गर्ने भन्ने मान्यताका पछाडी केही कारणहरु पनि छन् । यसैले आफ्नो मायालु जोडी रोज्ने,खोज्ने वा प्रस्ताव राख्ने दिनको रुपमा हाम्रै मगर जातिमा रहेको संस्कृतिलाई सारा नेपालीको प्रेम साट्ने दिनको रुपमा विकास गर्न सकिन्न र ? मगर जातिको यो संस्कृति हामी सारा नेपालीको आफ्नो संस्कृति हो । नेपाली माटो र मर्म छोएर विकसित यो संस्कृति अब हाम्रो ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ हुनसक्छ ।
पुष १५ गते तमु ल्होसार पनि पर्छ । यसैपनि यो हामी नेपालीको महत्वपुर्ण चाड हुँदै हो । हामीले मौलिक नाम दिएर अब यसलाई प्रेम दिवसको रुपमा मनाउन पनि सकिन्छ । पश्चिमेली संस्कृतिको विस्तारीकरणले हाम्रा मौलिकता क्षयीकरणमा परिरहेको वास्तविकतालाई अब हामी नेपालीले नै बुझ्नुपर्छ । समृद्धशाली देशहरुले आफ्नो सांस्कृतिक प्रभाव हाम्रो जस्ता देशहरुमा पार्न चाहन्छन् नै । उनीहरुको संस्कृति प्रचारित प्रसारित हुन्छ । हामीले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने हामीमा भर पर्छ ।
संस्कृतिका धनी हामी नेपालीले अब वाह्य संस्कृतिलाई यति धेरै प्राथमिकता दिएर हाम्रा मौलिकतालाई वेवास्ता गर्दै जाने हो भने हाम्रोपन र आफ्नोपन रित्तिने अवस्थामा नपुगिएला भन्न सकिन्न । एउटा उदाहरणका रुपमा यहाँ पुष १५ गतेलाई प्रेम वा प्रणय दिवसको रुपमा मनाउन सकिन्छ भन्ने चर्चा गरिएको हो । किनकी यसले पनि प्रेम–प्रणयको सान्दर्भिकता ग्रहण गरेको छ । यो भन्दा उपयुक्त अन्य मौलिक पर्व वा अवसर पनि हुन सक्दछन् । जे होस नेपाली मौलिकता सहितको प्रेम दिवस मनाउन थालौं र यसैलाई विश्वभर रहेका नेपाली माझ पनि प्रचार गरौं भन्ने मुख्य अभिप्राय हो ।
पाकिस्तानमा एक विश्वविद्यालयले ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ को साटो ‘बहिनी दिवस’ मनाउने घोषणा गर्यो
पाकिस्तानको एक विश्वविद्यालयले इस्लामिक परम्परा तथा संस्कृतिलाई बढावा दिनका लागि भन्दै हरेक वर्ष फेबु्रअरी १४मा सिस्टर्स डे मनाउने फैसला गरेको समाचार करिब १ महिना अघि नै वाहिर आएको थियो । फैसलावादस्थित कृषि विश्वविद्यालयले यस्तो निर्णय गरेको विश्वविद्यालयका उप कुलपतिले जानकारी दिएको एजेन्सीहरुले जनाएका थिए । विश्वविद्यालयले भगिनी दिवसको दिन छात्राहरुलाई स्कार्फ तथा कपडाहरु उपहारको रुपमा दिन सकिने नियम पनि तय गरेको थियो ।
स्मरण रहोस् सन् २०१७ मा इस्लामावाद उच्च अदालतले एक आदेश जारी गर्दै भ्यालेन्टाइन्स डे माथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रणय दिवस मनाउन मात्र होइन यस सम्बन्धी समाचार तथा समाग्रीहरु प्रकाशन प्रशारण समेत नगन सञ्चार माध्यमहरुलाई अदालतले आदेश दिएको थियो । नेपालको हकमा हामी धेरै निर्मम भएर अघि बढ्नु आवश्यक छैन् । मात्रै हामीसँगै भएको सम्पत्तिलाई प्राथमिकताका साथ सदुपयोग गर्ने पहल गरौं भन्ने कुरा हो ।
एउटा बहस नै चलाऔं, नेपाली मौलिकता अनुसारको प्रेम दिवस तय गरौं
नेपाल त संस्कृतिको खानी नै हो । अनगिन्ती संस्कृतिको अथाह भण्डार छ यहाँ । सांस्कृतिक मौलिकता,नेपालीपन तथा आफ्नोपन झल्किने अवसर जुराउन खासै गाह्रो विषय हैन् । वाहिरबाट आएको मात्रै उत्तम र उत्कृष्ट भन्ने मानसिकता भने त्याग्नु आवश्यक छ । विज्ञान,प्रविधी र आविष्कारका विषय हामीले अरुबाट सिक्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था त हामी बुझ्न सक्छौं । मौलिक संस्कृति हामीले अरुबाट ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन् । यसैले प्रेम तथा प्रणय झल्काउने उपयुक्त पृष्ठभुमी,इँतिहाँस,जनविश्वास वा मान्यता सहितको र नेपाली मौलिकता बोकेको पर्व वा अवसर कुन हुनसक्छ भनेर बहस चलाउनु आवश्यक छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुको समेत संलग्नतामा त्यस्तो अवसर वा दिनको तय गर्न सकियो भने सारा नेपाली त्यसलाई गर्वका साथ मनाउन सक्छौं । अपनत्व ग्रहण गर्न सक्छौं ।नेपाली मौलिक संस्कृतिको विस्तारीकरण पनि हुनेछ । सुचना प्रविधिको युगलाई सदुपयोग गर्दै हाम्रो मौलिक र अर्गानिक प्रेम दिवसको प्रचार प्रसार विश्वभर गर्न सक्छौं ।